Twiiter dia hanilika sary sy URL avy amin'ny fetra 140 | Androidsis
Tsy hanisa sary sy rohy ao anatin'ny fetra 140 ny Twitter
Twitter dia mitady fomba hatrany afaka manatsara ny tambajotra sosialy hafatra micro hanolorana endri-javatra tsara kokoa avy aminy. Ary izany ve tamin'ny maraina Naneho hevitra momba ilay lalao vaovao izahay rehefa mizaha toetra ny mpandray anjara Twitter marobe ho an'ny Android miaraka amin'ny safidy handefasana Periscope amin'ny bokotra voatondro ho azy.
Rahoviana izao Twitter te hanome fahalalahana bebe kokoa ho an'ireo mpampiasa rehefa manoratra hafatra lava kokoa. Hajanon'ny orinasa ny fanisana ny sary sy ny rohy ho ampahany amin'ny fetra 140 tarehin-tsoratra ao amin'ny lahatsoratra, olona iray akaiky ny Twitter voalaza.
Mety ho io fanovana io hitranga mandritra ny tapa-bolana manaraka araka ny loharanom-baovao mitovy izay tsy te hampahafantatra ny mombamomba azy. Ny rohy dia mitarika hatramin'ny 23 endri-tsoratra na dia manafoana azy ho azy aza ny Twitter.
Para afaka mihoatra an'io fetra io ny endri-tsoratra, ny mpampiasa dia namorona azy ireo foana mba hahafahany mandefa hafatra lava kokoa, toy ireo tranokala izay mety hitarina miaraka amina rohy ny atiny. Ary inona no holazaina momba ny pikantsary misy soratra lava kokoa na fandefasana bitsika maromaro mifandimby, izay mandratra ny traikefan'ny mpampiasa tsy nahy ihany koa. Traikefa iray izay te-hanatsara bebe kokoa ny Twitter amin'ny fahatongavan'ireo vaovao samihafa tato anatin'ny herinandro vitsivitsy.
Ny tambajotra sosialy fandefasan-kafatra dia efa nisy hatrizay ny antony nahatonga anao tao amin'ireo hafatra fohy ireo izay nanery ireo mpampiasa hamintina azy ireo amin'ny fomba izay voasambotra ny fikasana sy izay tian'izy ireo hambara nefa tsy mikapoka ny kirihitrala. Saingy noho ny fivoaran'ny firafitry ny Twitter, dia manomboka tonga ny fanovana amin'io lafiny io. Tahaka ny Instagram eo am-piandohany sy ny sariny amina endrika efajoro, ny tenimiafina hany ka efa novaina hatramin'ny fahavaratry 2015.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Tsy hanisa sary sy rohy ao anatin'ny fetra 140 ny Twitter
Sergi (Andriamatoa Android) dia hoy izy:
Valiny tamin'i Sergi (Andriamatoa Android)
Juan Carlos Camacho Hernandez dia hoy izy:
mandehana tonga ny fotoana
Valiny tamin'i Juan Carlos Camacho Hernandez
Na dia nampiavaka azy manokana aza izany antsipiriany izany ... Heveriko fa hanao soa izy ireo. Fotoana tokony hananana fahalalahana kely kokoa momba ny fanehoana hevitra
Misy zavatra toa izao nilaina hatry ny ela. Toa napetraka ihany ny batery farany.
Pablo Rovira Girona dia hoy izy:
Salama twitter veloma facebook
Valiny tamin'i Pablo Rovira Girona
Ny sary an-gazety OnePlus 3 dia manambara ny fitaovana manana endrika sy endrika kanto
Lenovo dia nanambara ny Moto G4 sy Moto G4 Plus